Till Death (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီတဈခါတော့ ၂၀၂၁နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ Horror, Thriller ဇာတျကားလေး Till Death နဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒီဇာတျကားရဲ့အဓိကဇာတျလိုကျဖွဈတဲ့ အနျမာဝ◌ဘျစတာ (Megan Fox) ဟာ အောငျမွငျတဲ့ရှနေ့တေဈယောကျရဲ့ဇနီးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ၀◌ဘျစတာဇနီးမောငျနှံရဲ့အိမျထောငျရေးဟာ အပွငျပနျးမှာအဆငျပွပေုံပျေါနပေမေယျ့ အတှငျးမှာတော့ယိုယှငျးနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနျမာဟာ သူ့ယောကျြားမကျချရဲ့ရုံးခနျးက၀◌နျထမျးဖွဈသူ တှနျမျနဲ့ဖောကျပွနျခဲ့ကွပါတယျ။
မကျချနဲ့အနျမာတို့ရဲ့မင်ျဂလာနှဈပတျလညျနမှေ့ာတော့ မကျချဟာအနျမာကိုလကျဆောငျတဈခုပေးခဲ့ပွီး သူတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့အမှတျတရတှရှေိခဲ့တဲ့အိမျလေးကိုချေါသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့နှဈပတျလညျနရေဲ့နောကျတဈနမေ့နကျမှာတော့ အနျမာအိပျယာကနိုးနိုးခငျြးမှာ မကျချဟာကိုယျ့ကိုယျကိုသတျသသှေားခဲ့ပါတယျ။ ခကျြခငျြးဆိုသလိုမယုံနိုငျစရာအဖွဈအပကျြတှနေဲ့ရငျဆိုငျလိုကျရတဲ့အနျမာဟာ အဲ့ဒီအိမျကွီးထဲမှာဘယျလိုတှဖွေဈပကျြပွီး ဘာတှနေဲ့ရငျဆိုငျရမှာလဲ??? ဒီထိတျလနျ့ဖှယျအဖွဈအပကျြရဲ့နောကျကှယျမှာ ဘယျလိုအတိတျတှရှေိနမှောလဲ???
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျနဲ့အညှနျးရေးသူကတော့ Erika Sean ဖွဈပါတယျ။
ဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၂၁နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Horror, Thriller ဇာတ်ကားလေး Till Death နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ အန်မာဝ◌ဘ်စတာ (Megan Fox) ဟာ အောင်မြင်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀◌ဘ်စတာဇနီးမောင်နှံရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ အပြင်ပန်းမှာအဆင်ပြေပုံပေါ်နေပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ယိုယွင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန်မာဟာ သူ့ယောက်ျားမက်ခ်ရဲ့ရုံးခန်းက၀◌န်ထမ်းဖြစ်သူ တွန်မ်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
မက်ခ်နဲ့အန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့ မက်ခ်ဟာအန်မာကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပြီး သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အမှတ်တရတွေရှိခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ အန်မာအိပ်ယာကနိုးနိုးချင်းမှာ မက်ခ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုမယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အန်မာဟာ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်ပြီး ဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ??? ဒီထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအတိတ်တွေရှိနေမှာလဲ???
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်နဲ့အညွှန်းရေးသူကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ်။
Aml Ameen Callan Mulvey Eoin Macken Jack Roth Julian Balahurov Lili Rich Megan Fox Stefanie Rozhko Teodora Djuric
Option 1 teracloud.jp 416 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 416 MB SD (480p)